Trump oo ku hanjabay inuu howlgelinayo milatari rabshadaha soo afjara | Xaysimo
Home War Trump oo ku hanjabay inuu howlgelinayo milatari rabshadaha soo afjara
Trump muxuu yiri?
Xoog mala adeegsan karaa?
Falanqeynta wariyaha waqooyiga Mareykanka Anthony Zurcher
Laga billaabo isniinta madaxweyne Trump waxaa soo fuulayey cadaadis ah inuu tallaabbo qaado si looga hortago xasiloonidarrada ka sii fideyso magaaloyinka waaweyn ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha oo aqalka cad warbaahinta kula hadlayna wuxuu ka dhawaajiyey tallaabbo uu doonayo in la qaado.
Wuxuuna maamullada magaalooyinka iyo barasaabyada gobollada uga digay haddii ay tallaabbooyin adag oo ay ku xakameynayaan rabshadaha socda qaadi waayaan inuu ciidamada milatariga Mareykanka inuu gudaha dalka ka howl gelinayo.
Columbia oo hoos taga dowladda federaalka madaxweynaha wuxuu madaxweynaha amar uu ku bixiyey in ciidama laga howl geliyo si mudaharaadayaasha xoog looga muquuniyo.
Balse madaxweynaha kama uusan hadlin isbeddellada loo baahan yahay booliska dhibka dhacay sababta u ahayd iyo mudaharaadyada ka dhashay oo toddobaadki hore soo billowday.
Halka uu madaxweynaha isku tilmaamay “madaxweynaha sharciga iyo kala dambeynta” taasoo la sheegay iney tilmaan u noqon karto xalka rabshadaha taagan wax looga qaban kara iney tahay xoog oo keli ah.
Mudaharadyada maxaa ka soo cusboonaaday?
In ka badan 75 magaalo ayey mudaharaadyada looga soo horjeedo dilka George Floyd ka socdaan. Waddooyinki maalma badan oo hawanayey xayiraadaha corornavirus awgii waxaa buux dhaafiyey mudaharaadyo tira badan oo garbaha isku haya.
Mudharaadayaasha ayaa markale mudaharaadyadooda xilli habeen ah dhigay, halka in ka badan 40 magaalo la kordhiyey bandowgi saarnaa.
Mudaharaadyada ka dhashay dilka George Floyd
Muuqal laga soo duubay magaalada New York oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya mudaharaadayaal kumannaan ah iyo qaarkood oo dukaanna boobaya.
Mudaharaadya kooban ayaa sida oo kale ka dhacay magaalooyinka Los Angeles iyo Oakland.
Axaddi mudaharaadyada badankood oo si nabadgalyo ah ku billowday ayaa marki dambe iisu beddelay rabshado, halkaasi oo iska horimaad uu ku dhexmaray booliska iyo mudaharaadayaasha.